Achọpụtala njem nlegharị anya ọhụrụ na Niger Delta na Naịjirịa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Achọpụtala njem nlegharị anya ọhụrụ na Niger Delta na Naịjirịa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Dị ka ụlọ ọrụ International Maritime Bureau (IMB) si kwuo, enwere ịtọrọ mmadụ 135 edere na 2020 - na 130 n'ime ha mere na Gulf of Guinea. Dị ka njide nke Mozart, ọtụtụ n'ime ịtọrọ mmadụ ahụ sochiri edemede na -arịwanye elu.
Ewezuga ndị isi njem nlegharị anya mpaghara a na -ele ndị nta akụkọ ka ha gbasaa onyonyo dị iche iche karịa nke mpaghara Naịjirịa a iji dọta ndị njem.
Niger Delta bụ Delta nke osimiri Niger na -anọdụ na Ọwara Guinea na Oke Osimiri Atlantic na Nigeria.
A maara Niger Delta maka Piracy, òtù ndị omempụ, na mwụfu mmanụ, na -eme ka mmepe njem nleta bụrụ ihe ịma aka.
Onye isi oche, Ndị otu ndị ntaakụkọ Naịjirịa (NUJ), Bayelsa State Council, Samuel Numonengi na -eche na mgbasa ozi adịghị mma dị ka nsogbu mmepe njem na mpaghara Niger Delta.
Njem na njem bụ ụlọ ọrụ udo. Nke a nwere ike bụrụ ohere ndị mmadụ na Niger Delta na Naịjirịa ga -eji rụọ ya. Onye na -egwu egwuregwu na mbọ a nwere ike si Jamaica.
Enweghị ebe ọ bụla n'ụwa ndị ohi mmiri na -etikarị ihe karịa na Ọwara Oké Osimiri Guinea, ebe e jidere ihe karịrị ndị ọkwọ ụgbọ mmiri 130 n'afọ gara aga.
Nchọpụta nke World Conservation Union na ụlọ ọrụ gọọmentị Naịjirịa na -egosi na, na nkezi kwa afọ n'ime afọ iri ise gara aga, mmanụ a na -awụfu na Naịjirịa bụ nha nke Exxon Valdez kwafuru na Alaska n'afọ 50.
Mpaghara ahụ dị ize ndụ karịa ụsọ oké osimiri Somalia. Ndị EU chọrọ ime ihe gbasara ya.
Ngalaba Steeti Amerịka na -ekwu maka njem na Naịjirịa: tụgharịa uche njem na Naịjirịa n'ihi mpụ, iyi ọha egwu, ọgba aghara obodo, ịtọrọ mmadụ, na mpụ ụgbọ mmiri. Mgbatị ahụ mụbara ịkpachara anya n'ihi AKOVKỌ-19. Fọdụ ebe enweela ihe egwu. Gụọ ihe niile Advisory Travel.
Ihe omumu nke 2018 na mpaghara Niger Delta na mmepe njem na -achịkọta:
Ebumnuche nke ọmụmụ a bụ inyocha ohi oke osimiri na ihe ọ pụtara na mmepe njem na mpaghara Niger Delta nke Naịjirịa.
Site na mmeghe ebe a na-anabata ndị njem, ọ sịrị na echiche ọha na mpaghara nke dabere na ntị bụ na-emebi mmepe mmekọrịta akụ na ụba na mpaghara Naijiria a, na-ekwusi ike na oge eruola ka ndị obodo anyị malite ịkọ akụkọ nke ha. akụkọ iji mezie nkọwa ụgha ndị gara aga gbasara mpaghara.
Onye isi oche, Ndị otu ndị ntaakụkọ Nigeria (NUJ), Kọmitii Bayelsa steeti, Samuel Numonengi ekwuola na mgbasa ozi adịghị mma bụ ihe na -ebute mmepe njem na mpaghara Niger Delta.
Numonengi kọwara enweghị akwụkwọ kwesịrị ekwesị nke ihe nketa ọdịbendị bara ụba nke ndị Ijaws dị ka nnukwu ihe ịma aka n'ịkwalite ikike ndị njem.
O kwuru na ọtụtụ nde ọrụ na azụmaahịa na -adabere na ngalaba njem nlegharị anya siri ike. Njem nlegharị anya abụrụla ihe na -akwalite ịchekwa ihe nketa sitere n'okike na nke ọdịbendị, na -echekwa ha maka ọgbọ na -abịa n'ihu ịnụ ụtọ ya
O kwuru na ebe ozi ndị ọbịa (VICs), ma ọ bụ nke a na -akpọ "Ebe Ozi Njem Nleta ma ọ bụ Ebe Nnabata, bụ isi hiwere isi iji nye ndị njem ozi enyemaka iji meziwanye ọnụnọ ha na ebe a gara.
Numonengi kwuru na a na -atụ anya na Kọmitii Njikwa Ozi Ọbịa nke Ernest Ikoli ga -eweta ọnọdụ enyi na nke nnabata maka ndị ọbịa na -eleta steeti ahụ na nke mbụ inwe ozi dị mkpa gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị njem, yana ịnye ndụmọdụ njem ma ọ bụ ntuziaka maka ndị dị otú ahụ. ndị njem nleta.
Ọ kọwara na ndị otu kọmitii nchịkwa nke Ernest Ikoli Visitor Information Center nke ahọpụtara nke ọma ga -amalite ọrụ nkwalite njem nlegharị anya site n'ịre ahịa ngwaahịa na ọrụ nlegharị anya mpaghara iji mepụta mmetụta ozugbo na akụ na ụba mpaghara na ebumnuche ịkwalite. ọdịmma ntụrụndụ nke ndị bi na ndị ọbịa.
Dị ka onye isi oche nke Steeti steeti si kwuo, atụmatụ a bụ akụkụ nke Bayelsa State Council nke Nigeria Union of Journalists iji kwado mbọ mmepe mmepe akụ na ụba nke nchịkwa ịba ọgaranya n'okpuru Senator Douye Diri.
Kọmitii na-ahụ maka njikwa ebe nlebara anya nke Ernest Ikoli nwere onye isi ndị njem njem njem nke Nigeria Union of Journalists, Bayelsa State Council, Piriye Kiyaramo dị ka Director General, ebe odeakwụkwọ nke Council Council nke NUJ, Comrade Ogio Ipigansi ga-abụ odeakwụkwọ.
Ndị otu ndị ọzọ gụnyere: Onye bụbu onye isi oche steeti otu, Tarinyo Akono, onye odeakwụkwọ steeti gara aga, C Stanley Imgbi, Onye Nchịkọba International Institute of Journalism (IIJ), Yenagoa Study Center, Roland Elekele na onye njikwa azụmaahịa nke Silverbird FM Oxbow Lake Swali-Yenagoa, Oyins Egrebindo
A họpụtakwara ya bụ General Manager Peoples 'FM, Oxbow-Lake, Lawson Heyford, onye isi njikwa nke Royal FM, Agudama, Tudor Ayah, Onye na-arụ ọrụ nke onye isi njikwa Bayelsa Broadcasting Corporation, Terence Ekiseh, Maazị Tonye Yemoleigha (Radio Bayelsa), Maazị Fiezibe Osain (Ozi Ozi), Maazị Agidee Theophilus (Afrịka Independent Television), onye nchịkọta akụkọ nke New Waves, Peace Sinclair, onye bụbu onye ọrụ nke NAWOJ, Beatrice Sikpi na onye bụbu onye isi oche Zonal nke National Association of Women Journalists. (NAWOJ), Oriakụ Timi Idoko.
Na nzaghachi, onye isi ụlọ ọrụ nke Ernest Ikoli Visitor Information Center, Comrade Piriye Kiyaramo, onye bụkwa onye isi oche, Travel Writers Corps nke NUJ, kelere ndị isi nke kansụl steeti ahụ maka ịchọta ya na ndị otu ndị ọzọ ruru eru ije ozi, dịka ya onwe ya kwere nkwa na ya ga -emezu ọrụ enyere ha.
A ga-echeta na ebe ozi onye ọbịa na-aga, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ dị ka "Ebe Nnabata" na-enye otu nkwụsị, ọnọdụ anụ ahụ nke ndị njem nwere ike jikọọ na azụmaahịa na ọrụ mpaghara.
Tụkwasị na nke a, a na -atụ anya na ụlọ ọrụ ozi onye ọbịa ga -enye ohere iji nweta ego site na ire ngwa ahịa na ọrụ aka mpaghara yana ijide ma nyochaa ozi na ọnụ ọgụgụ ndị njem dị mkpa maka ebumnuche atụmatụ.
Otu ọnwa gara aga, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na onye isi oche nke Global Tourism Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC), Edmund Bartlett, ekwuputala na mkparịta ụka na-aga n'ihu ugbu a maka iguzobe etiti satịlaịtị nke GTRCMC na Naịjirịa. Ikekwe nke a bụ ezigbo nzọụkwụ mbụ ịmalite njem na njem nlegharị anya n'otu mpaghara siri ike na nke kachasị mkpa na Africa.
The AfriNdị njem nlegharị anya nwere ike ịnabata atụmatụ a na Naịjirịa ma dịrị njikere inye aka mgbe a jụrụ ya.